Haala Yeroo Irratti Mari Pro. Asafaa Jaalataa fi Pro. Mohammed Hassan waliin godhame -
Haala Yeroo Irratti Mari Pro. Asafaa Jaalataa fi Pro. Mohammed Hassan waliin godhame
Gurraandhala 2, 2020
Kol. Gammachuu Ayyaanaa
” – Nagaan gaanfa Afrikaatti dhufuu kan dhanda’u yoo Oromoon dhugaasaatti deebi’e qofa
– Minilikis, H/Sillaaseenis, Dargiinis, Wayyaaneenis, Abiyyis Oromoorraa qawwee hiiksisaniiru garuu nagaa fiduu hin dandeenye.
– Tigireen taankii hidhachaa jiru; Amaarri Madfii hidhataa jiru; Oromoorraa gajaraafi mancaa hiiksisu
– Gaanfi Afrikaa nagaa argachuuf Oromoon haga isa ga’u hidhachuu qab.
– Ibiddi Oromootti qabsiifame kun gaanfa Afrikaa guba.
– Gabroomfataa qawweedhaan gobu; sammuu gabroome akka dhukkubsataatti wallaanu. Warri firasaa fi obbolaansaa gatee siidaa Minilikitti hirkatee taa’u ni dhukkubsata waan ta’eef warri wallaansa sammuu kennan walaanuu qabu.
– Biyyi Itoophiyaa kun hidaa maallaqaa hedduutu irra jira. Hidaa maallaqaa kana kadhattees rakkattees kaffaluu dandeessi. Gumaa Maammoofaa garuu salphaatti hin kaffaltu. Gumaafi lafti hin dulloomu.
– Kan biyyi keenya nagaa argatu, warri nu ajjeese adabamee ykn dhiifama yoo nu gaafate qofadha.
– Lafti Tuulamaa Tuulamaaf haa deebi’u; ilmaan Walloo alagaa jalaa ba’anii Oromiyaa jalatti haa bulan; hidhamaan hatattamaan haa hiikamu; komand postiin haa ka’u; lolli nurratti baname haa dhaabbatu. Yoo kun ta’e Itoophiyaa waliin nagaan jiraanna; kun ta’uu baannaan addaan galla.”
← What now for Ethiopia’s multinational federation? Ethiopia: International Committee of the Red Cross (ICRC) engages with police officers on international human rights standards on policing →